Tanàna any Madagasikara Info. About. What's This?
ⓘ Tanàna any Madagasikara
I Sofia dia onin i Madagasikara mivarina any andrefana any amin ny Ranomasimbe Indiana ao amin ny helodranoni Mahajamba ka ao izy dia misampana roa. Ireto avy ireo tanàna lalovani Sofia: Bejabora, Ambalafomby, Betsilendry, Analanambe, Ambatomay, Berohitra, Ansatramalaza, Ambarataty, Ambalafotaka ary Marivorano. Ireto ny renirano lehibe indrindra manompo azy: Anjombony sy Mangarahara.
I Sakay dia onin i Madagasikara mivarina miankandrefana avy ao amin ny faritra afovoan ny Nosy. Ilay tanàna miorina eo amorony atao hoe Bebetville dia tanàna noforonin ireo olona avy any La Réunion mpifindra monina teo anelanelanny taona 1952 sy 1977.
I Mahavavy na Mahavavy Avaratra dia onin i Madagasikara any avaratra, ao amin ny faritra Diana, ao amin ny faritanin Antsiranana, izay mivarina mankany andrefana ao amin ny Ranomasimbe Indiana. Ao Maromokotra, tendron ny tangorom-bohitra Tsaratanana no misy ny loharanony. Ambilobe no tanàna lehibe andalovan i Mahavavy. Mamakivaky tany lemaka lonaka izy ka anodrahana tany mirefy 5 500 ha izay ampiasaina indrindra amin ny fambolena landihazo.
I Onibe dia onini Madagasikara mivarina miantsinanana any aminny Ranomasimbe Indiana ao aminny faritra Atsinanana. Ao akaikin Anosy no misy ny loharanon i Onibe izay mandalo ao akaikin ireto tanàna manaraka iretoː Mangabe, Marovahy, Ampasimbe-Onibe ary Ambodibonara. Miampita ani Onibe ny lalam-pirenena faha-5. Ao atsimon i Mahatsara, ao avaratry ny tendro Mahavelona no misy ny vinanin i Onibe.
Ny Antambahoaka na Tambahoaka dia foko iray ao amin ny morontsirana atsimo-atsinanan i Madagasikara, tsy lavitra ani Mananjary, manakaiky ny Betsimisaraka ao avaratra, ny Tanala ao andrefana, ny Antemoro ao atsimo. Niisa teo amin ny 50 000 eo izy ireo tamin ny taona 2013. Misy amin izy ireo ny mitovy fiaviana arabo amin ny Antemoro, izay nisarahany tany amin ny taonjato faha-15 tamin ny andron-dRavalarivo. Ny fanajana ny razana sy ny fady no ivo andrindrana ny fiarahamonnin ny Antambahoaka. Mpanjono an-dranomasina sy an-drenirano ary am-parihy ny Antambahoaka. Ny ankamaroany dia manao asa ...
Ehoala dia seranan-tsambo malagasy ao aminny Kaominini Tôlagnaro ao aminny Faritra Anosy izay 10 km ao atsimo andrefanny tanani Tôlagnaro. Any ivelanny tanàna manakaiky ny seranam-piaramanidini Tôlagnaro no nanorenana azy ary nanomboka ny fampiasana azy taminny 8 Jolay 2009. Ny orinasa Rio Tinto no namatsy vola be indrindra taminny fanamboarana azy satria nila seranan-tsambo an-drano lalina ity Rio Tinto ity mba hanondranany ny ilmenita izay trandrahanny QIT Madagascar Minerals eo akaikinio seranana io. Ny Rio Tinto no tomponny 80 %nny vokatra azo raha 20 % ny anny firenena malagasy. Tsy m ...
Ny Communauté Evangélique Indépendante de Madagascar, izay hafohezina aminny hoe CEIM, dia fiangonana niforona eto Madagasikara taminny taona 1989 ary nijoro ara-panjakana taminny taona 1991. Fiangonana ara-pilazantsara na evanjelika manana firehana pentekotista ny CEIM. Manao fanompoam-pivavahana aminny teny malagasy sy aminny teny frantsay ny CEIM.
Antananarivo: renivohitra, 1.2 mpo. 2003
ianao Misy zavatra tsy ampy anatin ity fizaràna ity. Ilaina mandray anjara ianao Madagasikara Kaominina any Madagasikara Fiadanana Fandriana
ianao Misy zavatra tsy ampy anatin ity fizaràna ity. Ilaina mandray anjara ianao Madagasikara Kaominina any Madagasikara Mahazoarivo Fandriana
anjara ianao Misy zavatra tsy ampy anatin ity fizaràna ity. Ilaina mandray anjara ianao Madagasikara Kaominina any Madagasikara Ivato Ambositra
ianao Misy zavatra tsy ampy anatin ity fizaràna ity. Ilaina mandray anjara ianao Madagasikara Kaominina any Madagasikara Sahamadio Fandriana
Misy zavatra tsy ampy anatin ity fizaràna ity. Ilaina mandray anjara ianao Madagasikara Kaominina any Madagasikara Soavina Ambatofinandrahana
ianao Misy zavatra tsy ampy anatin ity fizaràna ity. Ilaina mandray anjara ianao Madagasikara Kaominina any Madagasikara Ambinanindrano Ambositra
Antsiranana, any avaratr i Madagasikara Ny renivohiny dia Sambava. Ny faritany dia ao amin ny amorontsiraka avaratra atsinanan i Madagasikara Izy io dia
tanàna any amorontsiraka andrefan i Madagasikara Eo amin ny vavaranon i Betsiboka ny misy azy. Izy ny renivohitra ny faritan i Mahajanga. 550 km any
Wikipedia: Tanàna any Madagasikara
Communauté Evangélique Indépendante d ..
actualités madagascar, cdc madagascar, dhis2 madagascar, latest on madagascar, unicef madagascar,